“Can 2019” – Valin’ady amin’i Kongo: miara-mirona amin’ny Barea ny malagasy | NewsMada
“Can 2019” – Valin’ady amin’i Kongo: miara-mirona amin’ny Barea ny malagasy
Hitodika ao amin’ny kianja Alexandrie, avokoa ny mason’izao tontolo izao, rahampitso alahady. Ho fantatra, amin’io mantsy ny ho tohin’ny dian’ny Barea de Madagascar, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja baolina kitra (Can 2019).
Hifantoka amin’ny lalao hikatrohan’ny Barea de Madagascar sy ny Leopard-n’i Kongo, eo amin’ny dingana ampahavalon-dalana, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 2019), taranja baolina kitra avokoa ny sain’ny rehetra, amin’ity faran’ny herinandro ity. Hotanterahina ao amin’ny kianja Alexandrie, ny lalaon’ny roa tonta, rahampitso alahady, manomboka amin’ny 7 ora hariva.
Hanala vela ny Barea
Kihon-dalana lehibe, ho an’ny ekipam-pirenena malagasy, io fihaonana io, satria tsy maintsy hisy hangoron-damba, eo amin’ny roa tonta. Firenena, mifankafantatra tsara ny andaniny sy ny ankilany, satria vao tamin’ny taona 2016, no nikatroka ka nivoaka ho mpandresy, ry zareo Kongoley.
Hanala vela sy hanao valinady, amin-dry zareo Kongoley, amin’ity ny Barea de Madagascar. Mailo ary tena matahotra fatratra ny Leopard, izay nilaza fa tsy ilay Barea, resiny tany Mahajanga, ity hitany any Egypta, ity. Na izany na tsy izany, nanambara fa mbola vonona hanakana ny lalan’ny Barea de Madagascr, izy ireo, amin’ity.
Mety hiakatra kianja i Ryan sy i Mamy Gervais
Etsy ankilany, ambony ny moralin’ny mpilalao malagasy, hiatrika an-dry zareo Kongoley, rahampitso. “Tantatra efa vita ny faharesena tany Madagasikara. Hafa mihitsy ny sehatra hihaonana amin’ity. Marina fa ambony ry zareo Kongoley, raha mitaha amin’ny Barea saingy hiezaka indray ny mpilalao malagasy, handresy azy ireo, izay karazana valinady”, hoy i Nicolas Dupuis, mpanazatra.
Tsiahivina, fa mpilalao roa tompon-toerana no tsy afaka hiakatra kianja, ny an’ny Barea, rahampitso dia i Bapasy, vodilaharana sy i Marco, irakiraka. Tsy mbola namoaka izay mety hisolo azy ireo ny mpanazatra, saingy mety ho Raveloson Ryan sy i Mamy Gervais.